आज वर्षकै पहिलो शुक्रबार ! तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
बैशाख ०५, २०७६ PS
आज मिति बिक्रम संवत २०७६ साल बैशाख महिनाको ६ गते शुक्रवार तदनुसार सन् २०१९ अप्रिल १९ तारिख तपाईको दिन कस्तो रहला ,हेर्नुहोस तपाईको आजको राशिफल
व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सोचे अनुरुपको लाभ मिल्नेछ। पारिवारिक वातावरण सुखमय बित्नेछ। स्वास्थ्य अनुकुल रहनेछ। प्रियाजनको भेटघाटले मन प्रफुल्लित हुनेछ। सहकर्मीको प्रसस्त साथ् र सहयोग प्राप्त हुनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा मान सम्मान मिल्नेछ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले सताउनेछ । बिद्यार्थी वर्गका लागि पढाई लेखाइमा समस्या आउन सक्नेछ। मानसिक चिन्ताले सताउने छ। मध्यन्न्ह पश्चातको समयमा भने स्वस्थ्य्मा सुधार भएर जानेछ। कर्यक्षेत्रमा प्रसंशा मिल्नेछ। शुभ समाचार सुन्न पाइने छ।
शारीरिक आलस्यता बढ्नेछ। परिवारका साथमा अनावश्यक मनमुटाव हुन सक्ने छ। अनावश्यक रुपमा खर्चको मात्र बढेर जानेछ।प्रतिस्पर्धात्मक कार्यमा सकेसम्म सहभागी नहुदामा नै लाभ हुने देखिन्छ।
अचनाक मित्र भेट हुने सम्भावना रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धमा सुख मिल्नेछ। स्वास्थ्य सामान्य रहेको छ। आर्थिक रुपमा हानी नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्ने छ। माताको स्वास्थ्यमा अचानक समस्या देखिनाले मानसिक चिन्ताले सताउन सक्छ।
बौद्धिक क्षेत्रमा सहभागी हुने अवसर मिल्ने छ।अनावश्यक बादविवादमा नाफस्दामा नै राम्रो हुने छ। आर्थिक लाभको सम्भावना रहेको छ। स्वास्थ्य सामान्य रहने छ। आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हुने छ।
बोलि प्रभावकारिता बढेर जानेछ । व्यवसायिक क्षेत्रमा लाभ मिल्ने देखिन्छ। पारिवारिक वातावारण आनन्दमय रहने छ। स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्ने छ। विदेशस्थित आफन्तबाट सुखद समाचार सुन्न पाइने छ।आर्थिक लाभ हुनेछ।
कुनै कार्य थालनी गर्नुपुर्व सोच विचार गरेर अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ। खर्चको मात्रा बढेर जानेछ। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या औउन सक्ने छ। समग्रमा तुला राशी भएकाहरुका लागि आजको दिन सामान्य बित्ने छ।
व्यापार व्यवसायमा लाभ मिल्ने छ। साथीभाईका साथमा घुम्न जाने अवसर मिल्ने छ। मनमा द्विविधा पैदा हुन सक्ने छ। स्वास्थ्य सामान्य रहेको छ। पारिवारिक वातावारणमा खुसियाली छाउने छ।
अपेक्षा गरे अनुरुप कार्यमा सफलता मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा समय अनुकुल रहेको छ। प्रियजनको भेटघाटले मन प्रफुल्लित हुनेछ। छोटो दुरीको यात्रा हुने सम्भावना रहेको छ। सन्तान सुख मिल्नेछ। आर्थिक लाभ हुने सम्भवना समेत रहेको छ।
वैदेशिक यात्राका लागि समय अनुकुल रहेको छ। धर्म कर्ममा मन जानेछ। परिवारका साथमा उल्लासमय समय रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीको साथ् र सहयोग प्रसस्त मिल्नेछ। धनका साथ साथै मान सम्मानमा पनि वृद्धि भएर जानेछ। पिताको तर्फबाट लाभ मिल्ने छ। दाम्पत्यजीवनमा मनमुटावको स्थिति आउन सक्नेछ।
नया कार्यको थालनी सकेसम्म आजको दिन नगर्दामा राम्रो हुनेछ। अनावश्यक मनमुटावमा नफस्नु होला। मध्यान्ह पश्चातको समयमा भने स्वास्थ्यमा सुधार भएर जानेछ। धार्मिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। भाई बहिनीको सम्बन्धमा सुमधुरता बढ्ने छ। आर्थिक लाभको सम्भावना रहेको छ।
व्यापार व्यवसायमा लाभ हुने समय रहेको छ। मनोरन्जनात्मक कार्यमा नै दिन व्यतित हुने छ। नया कार्यको थालनी सके सम्म नगर्नुहोला यात्रामा नानिस्कादा नै राम्रो हुनेछ। परिवारजनको साथमा अनावश्यक मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने छ।
प्रकाशित : बिहिबार, बैशाख ०५, २०७६१४:४२
यो हप्ता कुन-कुन राशि हुनेहरुको लागि शुभ रहला ? हेर्नुहोस् यसो भन्छन् चर्चित ज्योतिष !